सवारी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? ५० प्रतिशत रकम तिर्नैपर्ने « Naya Page
सवारी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? ५० प्रतिशत रकम तिर्नैपर्ने
प्रकाशित मिति :7November, 2018 12:53 pm
काठमाडौं, २१ कातिक । के तपाई निजी सवारी किन्ने सोंचमा हुनुहुन्छ ? अनि डाउन पेमेन्टका लापिग थोरै रकम जोहो गर्नु भएको छ । यहि यसो हो भने तपाईले थप रकम जोहो गर्नुपर्ने भएको छ ।
अब निजी सवारी साधनहरुको खरिदकर्ताले शुरुमै ५० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशिका जारी गर्दै सवारी कर्जाको डाउन पेमेन्टलाई ५० प्रतिशतमा झारेको हो ।
केन्द्रिय बैंकले १६ महिनापछि सवारी साधनको कर्जा सिमा घटाएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सवारी साधन कर्जालाई ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ६५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।